ဘုမ္မသီးငှက် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဘုမ္မသီးငှက် သို့မဟုတ် ဘုမ္မတီးငှက် (Treron phoenicoptera) သည် ခို၊ ချိုးတို့နှင့်အတူ "ကိုလမ်ဗီဒီ" မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍ ထင်ရှားသော ငုမျိုးဖြစ်သည်။ ခိုလောက်ပင် အလျား ၁၃ လက်မရှိ၍ ကိုယ်ကာယတုတ်ခိုင်သော ငှက်မျိုးဖြစ်သည်။ အမွှေးအတောင်များမှာ တစ်ကိုယ်လုံး စိမ်းနေသောကြောင့် သစ်ရွက်စိမ်းများနှင့် ခွဲခြား၍ မရနိုင်ပေ။ တစ်နှစ်လုံး အသင်းအအုပ်နှင့် နေတတ်၍ သစ်ပင်များပေါ်၌သာ ကျက်စားလေ့ ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် အလေ့ပေါက် သဖန်းပင်များပေါ်၌ အတွေ့ရများသည်။ သစ်ပင်ပေါ်၌ မလှုပ်မရှား နေတတ်ကြသောကြောင့် ငှက်တစ်အုပ် လုံးကိုပင် အောက်မှနေ၍ ကောင်းစွာ မမြင်နိုင်ချေ။ အသံကြားရမှသာ ယင်းတို့ရှိမှန်း သိရသည်။
လူလေချွန်သကဲ့သို့အော်တတ်သည်။ ဘုမ္မသီး၏ ခြေထောက်သည် ဝါ၍၊ မေးစေ့နှင့် လည်ချောင်းသည် လိမ္မော်ရောင် ပေါက်နေသည်။ အမြီးရင်း၌ အညိုတွင် အဖြူတန်းများရှိသည်။ ပျံသန်းသည့်အခါ တောင်ပံရှိ အဖြူမှတ်ကြီးကို ကောင်းစွာ တွေ့နိုင်သည်။ အရွယ်နှင့် မလိုက်အောင် သန်မာကြီးမားသော ခြေချောင်းများ ရှိသောကြောင့် သစ်ပင်တက်ရာ၌ ကျွမ်းကျင်သည်။ ဘုမ္မသီးသည် သစ်သီးများကို စားရာ သဖန်းသီးများကို အထူးနှစ်သက်သည်။
အစေ့၊ အဆန်၊ အဖူး၊ အစို့များကိုလည်းစားသောက် သည်။ ဘုမ္မသီးငှက်သည် မတ်လမှ ဇွန်လအတွင်း သားပေါက်သည်။ ချိုးကဲ့သို့အသိုက်ကို အကိုင်းအခက်များဖြင့် တော်သင့်ရုံ ပြုလုပ်တတ်သောကြောင့် မလုံခြုံသဖြင့် ဥများကို အောက်မှနေ၍ အထင်းသား မြင်နိုင်သည်။ တစ်မြုံလျှင် များသောအားဖြင့် ဥ အဖြူ ၂ လုံးရှိတတ်၏။ ဥများမှာ မာ၍ ချောမွတ်သည်။
ဘုမ္မသီးငှက်များကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် သီဟိုဠ်ကျွန်းတွင် အနှံ့အပြား တွေ့ရ၍ အရှေ့ဘက်တွင် ဗီယက်နမ်တောင်ပိုင်းနှင့် ယိုးဒယားထိအောင် တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ နေရာအနှံ့အပြားတွင် ကျက်စားကြသော်လည်း၊ အထူးသဖြင့် အပူပိုင်းဒေသများတွင် အတွေ့ရများသည်။ 
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ ပလိပ်အင်း ရေတိမ်ဒေသအနီးရှိ ညောင်ပင်များ ညောင်သီးသီးချိန်တွင် ဘုမ္မတီးငှက်များ လာရောက်စားသောက်လေ့ ရှိသည်။ ဘုမ္မတီးငှက်သည် ဌာနေငှက် ဖြစ်သည်။ 
↑ BirdLife International (2012). "Treron phoenicopterus". IUCN Red List of Threatened Species 2012. IUCN. old-form url
↑ မန္တလေးနေ့စဉ်၊ ၁၇-၉-၂၀၁၈၊ စာ-၁၇
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘုမ္မသီးငှက်&oldid=718508" မှ ရယူရန်